:Bọchị: Jenụwarị 10, 2020
1 (otu) onye isi ọdee akwụkwọ nke Turkish Consulate General nke Toronto ka a ga-anabata ọnọdụ nke Secretary. II) Eligibility IHE Scholarships: 1. enwe a nwa amaala nke Republic of Turkey, 2. Nnyocha ụbọchị 41 afọ [More ...]
Ilszọ okporo ụzọ dị elu site na Karabük, Shebụ sitere Çankırı, Ndị na-agba ọsọ si Sivas
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan kwuru na ụzọ ụgbọ oloko 2023 ga-agwụcha wee dabere na ebumnuche 5.509 nke mba anyị, yabụ, ogologo okporo ụzọ ga-eru kilomita 17.525. Ntube ubara obodo nke mba di iche iche [More ...]
Ümụ akwụkwọ AGÜ ga-eme ọzụzụ na Deutsche Bahn
Mahadum Abdullah Gül (AGU) abanyela aka na Deutsche Bahn (German Railways), ụlọ ọrụ njem na ngwa agha na ụwa na nnukwu ọrụ ụgbọ ala na Europe. AGU [More ...]
Bursaray ga -ebelata ụgwọ ọkụ eletrik
Azụmaahịa ụgbọ njem ọha nke Bursa ga-eji ike anyanwụ weghara ụgwọ ọkụ eletrik. Azụmaahịa ụgbọ njem ọha nke Bursa ga-eji ike anyanwụ weghara ụgwọ ọkụ eletrik. Bursa Transportation Co. bu onye ntinye aka nke Bursa Metropolitan Obodo. (BURULAŞ), na otu usoro ebido 'Solar Energy [More ...]
Iwu Transportgbọ Ndị Ọha na-enwe Iwu Ọmụmụ maka atgbọ Mmiri Metro
N’ọdụ ụgbọ okporo ígwè Mecidiyeköy, ụmụ akwụkwọ sekọndrị haziri ihe omume iji dọta uche na iwu ụgbọ njem ọha. Studentsmụ akwụkwọ ahụ nke na-anọchite anya ọsọ ọsọ ịgba ọsọ na ụzọ ụgbọ oloko dịka onye nnọchi anya, akwadebewo ụkpụrụ omume na akwụkwọ ịma ọkwa ha na broshuọ ha. [More ...]
Kılıçdaroğlu na-ekwu okwu na Channel Istanbul Workshop
Onye ndu CHP Kemal Kılıçdaroğlu kwuru okwu na Düzen Channel Istanbul Workshop I nke IMM haziri. Dik Anyị erutela ụdịrị ihe a na ha na-ebulite nri nri enyere ụmụ akwụkwọ mahadum. Lee anya na ego nke ndị ikwu na ndị agha nke ndị nwụrụ n'ihi okwukwe nke ọnwa Julaị 15 [More ...]
Onye isi obodo Nizip Mehmet Sari, Gaziantep na mpaghara okporo ụzọ Nizip ga-arụ ọrụ na usoro ụgbọ oloko ga-enwe nchekwa na ahụike karịa, o kwuru. Mayor nke Nizip Mehmet Sarı, [More ...]
N’ebe a na-ere ihe elektrọniki - CES 2020, Fiat gosipụtara echiche ọhụrụ na echiche eletrik ele anya bụ Fiat Concept Centoventi. Las Vegas, ngosipụta eletrik eletrik eletrik kachasị ọnụ n'ụwa niile CES 2020 [More ...]
Onye isi oche otu MARA Akşener kwuru okwu na İstanbul Channel Istanbul Workshop I nke IMM haziri. Akşener kwuru, "Ọwa a elekwasịghị anya na Istanbul maka afọ 9. Ndị na-ekwu 'Ecdat ecdat' [More ...]
Obere obodo akpọbatala ụwa na CES 2020 ngosi
Turkey si Automobile Enterprise Group (TOGG), na US na ụlọ auto Las Vegas na Consumer Electronics Gosi ẹkenịmde ke (CES) ẹkenam ụwa ka ọha na eze. Dị ka ozi òkè site Turkey si LinkedIn akaụntụ Cars Initiative Group CEO TOGG [More ...]
Kahramanmaraş onye bụbu onye isi obodo Mayor Fatih Mehmet Erkoç na-arụ ọrụ, usoro ụgbọ okporo ọkụ dị na shelf. Mayor Güngör na Ak [More ...]
İmamoğlu: Nsonaazụ Nkwado Ọwa Istanbul
Channellọ ọrụ 'Channel Channel Conference tarafından' nke ndị IMM haziri, bidoro na ntinye aka onye isi CHP Kemal Kılıçdaroğlu na onye isi oche GOOD Meral Akşener. Ekrem İmamoğlu, Onye Isi Obodo nke Metrolọ Ọrụ Etiti obodo Istanbul kwuru okwu mmeghe, “Istanbul, Kanal [More ...]
Kayseri ga-abụ afọ 2020 Investment and Tourism
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç, mere nzukọ ndị nta akụkọ na Erciyes. Na nzukọ ahụ, Mayor Büyükkılıç tụlere afọ 2019 wee nye ozi gbasara itinye ego a ga-eme na 2020. N’afọ 2019, obodo ahụ natala ijeri atọ na iri na anọ [More ...]
Amalitere Tragbọ Ugbaala Na-adịghị Anaghị Anwụ Worldwa na China
E tinyere ụgbọ okporo ígwè na-akwọ ụgbọ ala mbụ n'ụwa, nke nwere ike ịga njem kilomita 350 kwa elekere na China. Traingbọ oloko a ga-arụ ọrụ n'etiti isi obodo Beijing na obodo Zhangjiakou, ebe a ga-eme asọmpi Ugboro 2022. Ndi Republic of China na teknụzụ ụgbọ elu dị elu [More ...]